Ukukhanya okusebenzayo okutsha kunokutshatiswa kunye neendidi ezimbini zeebakaki: izibiyeli ezisongelayo kunye nezibiyeli ezifanayo
Uhlobo lwesibiyeli esisongiweyo
Uhlobo lwesibiyeli olufanayo
I-3000/4000 / 6500K
Iipesenti ezingama-50: 6H
1I-Rechargeable kunye netshaja
Ukuxhotyiswa ngebhetri yokugcina i-lithium, ehlala ixesha elide, intlawulo enye yokukhanyisa okuzinzileyo iiyure ezingama-3-6; Ukusetyenziswa komthombo wokukhanya kwe-LED, ubomi obude, umthombo wokukhanya ocacileyo, ukukhanya okufanayo; Ukuxhotyiswa kwitshaja yaseYurophu, kulula ukutshaja ukukhanya kwakho okusebenzayo, kwaye inokhuselo olugqithisileyo.
Izitayile ezi-2 eziVulekayo, eziPhathekayo kunye nokuNobunzima
Ukuxhotyiswa ngesibiyeli esomeleleyo sesinyithi kunye nesiphatho, imodeli yokusonga inokujikeleza inyuke iye ezantsi nge-360 °, ekhohlo nasekunene nge-360 °, imodeli efanayo inokujikeleza inyuke iye ezantsi nge-360 °, ekhohlo nasekunene nge-360 °. Elula kwaye iguquguqukayo, inokuhlengahlengiswa ngokwee-engile ezahlukeneyo, ukuze ukwazi ukugxila kukukhanya kwindawo esebenzayo ngokuhambelana neemfuno zakho.
3.IP65 engenawo manzi
Yenziwe ngomgangatho ophezulu wealuminium alloy, ukusebenza okungangeni manzi ukuya kuthi ga kwi-IP65, efanelekileyo ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla, kunokuyenza isebenze ngesiqhelo kwimvula okanye ikhephu, elungele ukukhanya kwangaphakathi nangaphandle.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weLampu yeLampu yokuSebenza - i-Ultrathin enokutsha kwakhona ukuKhanya koMsebenzi we-LED-Hengjian
Okulandelayo: UkuKhanya kokuSebenza ngepakethi yebhetri
Ukukhanya koMsebenzi okungama-360
IHyper Tough 1000 Lumen egcwalisekayo yokuKhanya koMsebenzi
Inverter Iqhubu Ukusebenza
Ipaki yokuKhanya koMsebenzi
Izibane zomsebenzi weZithuthi